ဓာတ်ဆီနဲ. ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာ ထည်.မိရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ? – Nyi Ma Lay
ဓာတ်ဆီနဲ. ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာ ထည်.မိရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ?
By Nyi Ma LayPosted on November 13, 2021
သင်ဟာ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် ကားတစီးကို မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်း သူတယောက်ြ ဖစ်ရင်ဖြစ်မယ် ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကားကို မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတေ ယာက်ဖြစ်ရင်ြ ဖစ်ပါမယ် ။ သင့်ကား ဆီဖြည့်စဉ်မှာ ဆီဆိုင်က ဓာတ်ဆီကားကို ဒီဇယ် မှားထည်.လိုက်မိတယ် ၊ ဒီဇယ်ကား ကို ဓာတ်ဆီမှား ထည်.လိုက်မိတ ယ်ဆိုပါစို. ၊( ဖြစ်ခဲပေမယ့် ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ် ) ၊
သင်ကလည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဆီမှားထည်.လိုက်တာမသိ ဘဲ ကားစက်နှိုးလို က်မိတယ်ဆို သင်ကားအင်ဂျင် ဘာတွေဖြစ် သွားနိုင်မ လဲဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ.ကျကျ ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ် ။
ဆီမှားထည်.တဲ့ ပြသနာဘာတြွေ ဖစ်နိုင် တယ်ဆိုတာကို မသိခင် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ. ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တို.ရဲ. မတူကွဲပြားတဲ့ အင်ဂျင်တ ည်ဆောက်ပုံ မီးလောင် ပုံလေးတွေကို သိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ် ။ ကျနော်အရင်ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ရှာဖွေဖတ်နိုင်ပါ တယ် ။ အခုတင်ပြချင်တာက ဓာတ်ဆီနဲ. ဒီဇယ်ဆီတို.ရဲ. မတူကွဲပြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုပါ ။
အငွေ.ပျံလွယ်သည် ၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ အငွေ.ပျံသည် ။ အရောင်မရှိ ၊ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည် ၊ အနံ.အနည်းငယ်သင်းပျံ.သည် ။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် ( Flash Point ) = -10 to -15 ‘ C (or) 14 to 15 ‘ F နိပ်သောသိပ်သည်းဆ (0.60 to 0.78) … ဆီနှင့်ရာဘာထဲသို. စိမ့်ဝင်နိုင်သည် ။ အပူချိန်ပမာဏ ( 9500 to 10500 Kcal / Kg 0r 4300 to 4800 Kcal / lb )
အေးနေသော အင်ဂျင်ကို စတင်နိုးချိန်တွင် လေနှင့်ဆီရောနှောမှုလွယ်ကူစေရန် လွယ်ကူသော အငွေ.ပျံစွမ်းရည်ရှိသည် ။
ဒီဇယ်ကို ရေနံစိမ်းမှ အပူချိန် 200 ‘ C -300 ‘ C (104 to 212 ‘ F ) ရှိသည် ။ ဒီဇယ်သည် ရေနံဆီ ဓာတ်ဆီတို.ထက် နောက်ကျပေါင်းခံထားသော လောင်စာဆီဖြစ်သည် ။ အဝါရောင်သန်းသည် ၊ သင်းပျံ.သောရနံ.ရှိသည် ။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် ( Flash Point ) မြင့်မားပြီး 40 to 100 ‘ C (or) 104 to 212 ‘ သိပ်သည်းဆ ( 0.82 to 0.86 ) အပူချိန်ပမာဏ အနီးစပ်ဆုံး ( 10500 ‘ Kcal / Kg or 4800 Kcal / lb ) နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အရည်အဖြစ်တည်ရှိနေရမည် ။
ဒီဇယ်သည် အင်ဂျက်ရှင်းပန်. ( Injection Pump ) နှင့် နော်ဇယ် (Nozzle ) များအတွင်းချောဆီ အဖြစ်ေ ဆာက်ရွက်ရသဖြင့် စေးပျစ်ပြီး ချောဆီဂုဏ် သတ္တိရှိရမည် ။
ဆီနှစ်ခုရဲ. မတူညီတဲ့ ဂုဏ်သ တ္တိနှစ်ခုကို သိပြီဆိုရင် အခု ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲကို ဒီဇယ်ဆီမှားထည်.ကြည်.ပါမယ် ။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် ထဲကို ဒီဇယ်ဆီထည်.ပြီး စက်နိုးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ?
အဖြေကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။ သင့်ကားအင်ဂျင် စက်နှိုးလာ မှာမဟုတ် ပါဘူးခမျာ ။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ် ။ ဓာတ် ဆီအင်ဂျ င်မီးလော င်ပေါက်ကွဲပုံက ဓာတ်ဆီနှင့်လေ အရောအနှောတွေကို အင်ဂျင်ထဲထည်. ဖိသိပ်ပြီး ပလက်ကေ နမီးပေါက်ပေးပြီး မီးလော င်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေ တာပါ ။
ဒီလိုအင်ဂျင်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေဖို. ဓာတ်ဆီ ကိုက သူ.ဂုဏ် သတ္တိအရ လေနဲ.ရောနှောရင် အဆင်ပြေစေဖို. အငွေ.ပျံလွယ် တဲ့စွမ်းရည်သ တ္တိရှိပါတယ် ။ ဒီလိုအင် ဂျင်ထဲကို အငွေ.မပျံလွယ် တဲ့ ဒီဇယ်ထည်.လိုက်တဲ့အခါ ဒီဇယ် ဟာ အငွေ.မ ပျံဘဲ အရေတွေအြ ဖစ်နဲ.ပဲတ ည်ရှိနေလို. လေနဲ.အရော အနှောမှာ ပေါက်ကွဲမီး လောင်စေဖို. ဘယ်လိုမှမလွယ်ကူစေပါဘူး ။
နောက်တချက်က ဓာတ်ဆီ ရဲ. မီးလောင်လွယ် နိုင်စွမ်း ပမာဏက မြင့်မားပြီးသားမို. အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပုံကိုက အပူချိန်များေ စတဲ့ တမင်ဖိနှိပ်မှုများတွေမ ပါဝင်ပါဘူး ။ ဒီတော့ ဒီလိုအင်ဂျင်ထဲမှာ မီးလောင်မလွယ်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီဟာ မီးလောင် ဖို.လိုအပ်တဲ့အ ပူချိန်မရရှိလို. မီးေ လာင်ကျွမ်း ဖို.မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
ဒီတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲ ဒီဇယ်ထည်.မိပြီး စက်နှိုးလိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခမျာ ဓာတ်ဆီကားေ မာင်းသူတွေကံေ ကာင်းပါတယ် ။ မတော်မှား ထည်.မိရင် စက်နှိုးမရ တာကလွဲလို. အင်ဂျင်မထိခိုက်ဘဲ ဆီတိုင်ကီ ထဲက ၊ ပိုက်လိုင်းတွေထဲက မှားထည်.မိတဲ့ ဒီဇ ယ်တွေကို ကုန်ေ အာင်ထုတ် ဓာတ်ဆီပြ န်ထည်.မောင်းလို.ရပါတယ် ။ ကဲဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပြီးတော့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်အလှည့်ပေါ့ ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင် ထဲကို ဓာတ်ဆီ မှားထည်.ပြီး စက်နှိုးမောင်းမိရင် ဘာဖြစ်မလဲ ?
အဖြေက ခေတ်စကားနဲ.ပြောရရင် မြွေခြောက်ကိုက် သလိုပါပဲဗျာ ။ အင်ဂျင်ရယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အကုန်ဂန်.သွားနိုင်ပါတယ် ။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ် ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီးလော င်ေ ပါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်က ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲကို လေတမျိုးထဲကိုသာ Inlet ကနေ သွင်း ၊ အဲ့လိုကိုပဲ အပူချိန်အများ ကြီးရအောင် Piston ဖိအားတွေနဲ. အတင်းဖိသိပ် ၊ တော်ရုံမီးမလောင်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီတွေ မီးလောင်လောက်တဲ့ အပူချိန်ေ ရာက်ပြီဆိုမှ ဒီဇ ယ်ဆီတွေကို နော်ဇယ်ကနေ သတ်မှတ်အတိုင်းအတာအဖြစ် အမှုန်အမွှားေ လးတွေဖြန်းေ ပးခြင်းဖြင့် မီးလောင်တာပါ ။
အဲ့လိုအင်ဂျင်ထဲကို မီးလောင်လွယ်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ဆီထည်.ပါပြီတဲ့ဗျာ ။ အပူချိန် အနှုတ်ဒီဂရီ မှာတောင်မီးေ လာင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ဆီဟာ မလောင်လော င်အောင် အပူချိန်နဲ.ဖိ အားတွေပေးထာတဲ့ အင်ဂျင်ထဲမှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အထိန်းအကွပ်မဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ( Uncontrolled Combustion ) ဖြစ်ပါတော့တယ် ။
အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဂျင်သံ မီးလောင်မှုကို နား မထောင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းနဲ.ဆိုရင် သတိမမူမိဘဲ အချိန်အတော် ကြာမောင်းလိုက်မယ် ဆိုရင်ပဲ အင်ဂျင်အတွ င်းက မီးလောင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Piston , Valve , Cylinder Head , Cam Shaft အစရှိတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စ ည်းတွေအကု န်ပျက်စီးပါမယ် ၊ ဝပ်ရှော့ပို.ပြီး အင်ဂျင်ချရမယ် ။
အတွင်းပစ္စည်းေ တွအကုန်ပြုပြ င်လဲလည် ရနိုင်ပါတယ် ။ ဒါတွင် ပဲလားဆို မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာ သုံးနေတဲ့ နော်ဇယ်တွေ အင်ဂျက် ရှင်းပန်.တွေဟာ ဒီဇယ်ရဲ. စေးပျစ်မှု ချောဆီသဘောကို မှီခိုပြီးရပ်တည်နေပါတယ် ။
အဲ့လိုပစ္စည်းေ တွထဲကို စေးပျစ်မှုမရှိတဲ့ ဓာတ်ဆီထည်.လည်ပတ်လိုက် တဲ့အတွက် ချောဆီစနစ်ပျက်စီးပြီး နော်ဇယ်တွေ အင်ဂျက်ရှ င်းတွေပါ အပိုလိုက်ဂန်.ပါမယ် ၊ တခြား ရာဘာစီးတွေမှာလည်း ဓာတ်ဆီဟာပျော်ဝင်ကုန်တာမို. အင်ဂျင်တခု လုံးပျက်စီးမှုမျိုးစုံြ ကုံတွေ. ရပါမယ် ။
ဒီဇယ်အင်ဂျ င်ယာဉ်ေ မာင်းဆရာတွေ သတိပြုြ ကစေလိုပါတယ် ။ ဓာတ်ဆီ မှားမထည်.မိဖို.ရယ် မှားထည်.မိရင်တောင် စက်နှိုးပြီးပြီး ချင်သိပြီး အချိန်မှီ အခြေအနေမ ဆိုးခင်ရပ်တန်.ဖို.ရယ်ပါ ။
ဒီလောက်ဆို ဆီမှားထည်.တဲ့ ပြသနာကနေ အင်ဂျင်တွေဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလောက်ပါပြီ ။ နောက်ဆုံး သတိပေးချ င်တာက ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲ ဓာတ်ဆီ လုံးဝ (လုံးဝ)ထည်.မောင်းလို.မရပါခမျာ ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေ ။ Credit L.Zarni (P.T.U)
သင္ဟာ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ ကားတစီးကို ေမာင္းေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္း သူတေယာက္ျ ဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ ၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကားကို ေမာင္းေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတ ယာက္ျဖစ္ရင္ျ ဖစ္ပါမယ္ ။ သင့္ကား ဆီျဖည့္စဥ္မွာ ဆီဆိုင္က ဓာတ္ဆီကားကို ဒီဇယ္ မွားထည္.လိုက္မိတယ္ ၊ ဒီဇယ္ကား ကို ဓာတ္ဆီမွား ထည္.လိုက္မိတ ယ္ဆိုပါစို. ၊( ျဖစ္ခဲေပမယ့္ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ) ၊
သင္ကလည္း အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ဆီမွားထည္.လိုက္တာမသိ ဘဲ ကားစက္ႏွိုးလို က္မိတယ္ဆို သင္ကားအင္ဂ်င္ဘာေတြျဖစ္ သြားနိုင္မ လဲဆိုတာကို သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ.က်က် ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။
ဆီမွားထည္.တဲ့ ျပသနာဘာေႂတြ ဖစ္နိုင္ တယ္ဆိုတာကို မသိခင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္နဲ. ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တို.ရဲ. မတူကြဲျပားတဲ့ အင္ဂ်င္တ ည္ေဆာက္ပုံ မီးေလာင္ ပုံေလးေတြကို သိထားရင္ပိုေကာင္းပါတယ္ ။ က်ေနာ္အရင္ေရးထားတဲ့ ပိုစ့္မွာရွာေဖြဖတ္နိုင္ပါ တယ္ ။ အခုတင္ျပခ်င္တာက ဓာတ္ဆီနဲ. ဒီဇယ္ဆီတို.ရဲ. မတူကြဲျပားတဲ့ ဂုဏ္သတၱိေတြကိုပါ ။
အေငြ.ပ်ံလြယ္သည္ ၊ ပုံမွန္အပူခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူစြာ အေငြ.ပ်ံသည္ ။ အေရာင္မရွိ ၊ ထြင္းေဖာက္ျမင္နိုင္သည္ ၊ အနံ.အနည္းငယ္သင္းပ်ံ.သည္ ။
မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းရန္ အနိမ့္ဆုံးေသာ အပူခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္ ( Flash Point ) = -10 to -15 ‘ C (or) 14 to 15 ‘ F နိပ္ေသာသိပ္သည္းဆ (0.60 to 0.78) … ဆီႏွင့္ရာဘာထဲသို. စိမ့္ဝင္နိုင္သည္ ။ အပူခ်ိန္ပမာဏ ( 9500 to 10500 Kcal / Kg 0r 4300 to 4800 Kcal / lb )
ေအးေနေသာ အင္ဂ်င္ကို စတင္နိုးခ်ိန္တြင္ ေလႏွင့္ဆီေရာေႏွာမႈလြယ္ကူေစရန္ လြယ္ကူေသာ အေငြ.ပ်ံစြမ္းရည္ရွိသည္ ။
ဒီဇယ္ကို ေရနံစိမ္းမွ အပူခ်ိန္ 200 ‘ C -300 ‘ C (104 to 212 ‘ F ) ရွိသည္ ။ ဒီဇယ္သည္ ေရနံဆီ ဓာတ္ဆီတို.ထက္ ေနာက္က်ေပါင္းခံထားေသာ ေလာင္စာဆီျဖစ္သည္ ။ အဝါေရာင္သန္းသည္ ၊ သင္းပ်ံ.ေသာရနံ.ရွိသည္ ။
မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းရန္ အနိမ့္ဆုံးေသာ အပူခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္ ( Flash Point ) ျမင့္မားၿပီး 40 to 100 ‘ C (or) 104 to 212 ‘ သိပ္သည္းဆ ( 0.82 to 0.86 ) အပူခ်ိန္ပမာဏ အနီးစပ္ဆုံး ( 10500 ‘ Kcal / Kg or 4800 Kcal / lb ) နိမ့္ေသာအပူခ်ိန္တြင္ အရည္အျဖစ္တည္ရွိေနရမည္ ။
ဒီဇယ္သည္ အင္ဂ်က္ရွင္းပန္. ( Injection Pump ) ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္ (Nozzle ) မ်ားအတြင္းေခ်ာဆီ အျဖစ္ေ ဆာက္ရြက္ရသျဖင့္ ေစးပ်စ္ၿပီး ေခ်ာဆီဂုဏ္ သတၱိရွိရမည္ ။
ဆီႏွစ္ခုရဲ. မတူညီတဲ့ ဂုဏ္သ တၱိႏွစ္ခုကို သိၿပီဆိုရင္ အခု ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထဲကို ဒီဇယ္ဆီမွားထည္.ၾကည္.ပါမယ္ ။ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ ထဲကို ဒီဇယ္ဆီထည္.ၿပီး စက္နိုးလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ ?
အေျဖကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ။ သင့္ကားအင္ဂ်င္ စက္ႏွိုးလာ မွာမဟုတ္ ပါဘူးခမ်ာ ။ စနစ္တက်ျပန္ရွင္းျပပါမယ္ ။ ဓာတ္ ဆီအင္ဂ် င္မီးေလာ င္ေပါက္ကြဲပုံက ဓာတ္ဆီႏွင့္ေလ အေရာအေႏွာေတြကို အင္ဂ်င္ထဲထည္. ဖိသိပ္ၿပီး ပလက္ေက နမီးေပါက္ေပးၿပီး မီးေလာ င္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစ တာပါ ။
ဒီလိုအင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစဖို. ဓာတ္ဆီ ကိုက သူ.ဂုဏ္ သတၱိအရ ေလနဲ.ေရာေႏွာရင္ အဆင္ေျပေစဖို. အေငြ.ပ်ံလြယ္ တဲ့စြမ္းရည္သ တၱိရွိပါတယ္ ။ ဒီလိုအင္ ဂ်င္ထဲကို အေငြ.မပ်ံလြယ္ တဲ့ ဒီဇယ္ထည္.လိုက္တဲ့အခါ ဒီဇယ္ ဟာ အေငြ.မ ပ်ံဘဲ အေရေတြၾအ ဖစ္နဲ.ပဲတ ည္ရွိေနလို. ေလနဲ.အေရာ အေႏွာမွာ ေပါက္ကြဲမီး ေလာင္ေစဖို. ဘယ္လိုမွမလြယ္ကူေစပါဘူး ။
ေနာက္တခ်က္က ဓာတ္ဆီ ရဲ. မီးေလာင္လြယ္ နိုင္စြမ္း ပမာဏက ျမင့္မားၿပီးသားမို. အင္ဂ်င္တည္ေဆာက္ပုံကိုက အပူခ်ိန္မ်ားေ စတဲ့ တမင္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေတြမ ပါဝင္ပါဘူး ။ ဒီေတာ့ ဒီလိုအင္ဂ်င္ထဲမွာ မီးေလာင္မလြယ္နိုင္တဲ့ ဒီဇယ္ဆီဟာ မီးေလာင္ ဖို.လိုအပ္တဲ့အ ပူခ်ိန္မရရွိလို. မီးေ လာင္ကၽြမ္း ဖို.မျဖစ္နိုင္ပါဘူး ။
ဒီေတာ့ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထဲ ဒီဇယ္ထည္.မိၿပီး စက္ႏွိုးလိုက္ရင္ ဘာမွမျဖစ္နိုင္ပါဘူးခမ်ာ ဓာတ္ဆီကားေ မာင္းသူေတြကံေ ကာင္းပါတယ္ ။ မေတာ္မွား ထည္.မိရင္ စက္ႏွိုးမရ တာကလြဲလို. အင္ဂ်င္မထိခိုက္ဘဲ ဆီတိုင္ကီ ထဲက ၊ ပိုက္လိုင္းေတြထဲက မွားထည္.မိတဲ့ ဒီဇ ယ္ေတြကို ကုန္ေ အာင္ထုတ္ ဓာတ္ဆီၿပ န္ထည္.ေမာင္းလို.ရပါတယ္ ။ ကဲဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ၿပီးေတာ့ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အလွည့္ေပါ့ ။
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ထဲကို ဓာတ္ဆီ မွားထည္.ၿပီး စက္ႏွိုးေမာင္းမိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ ?
အေျဖက ေခတ္စကားနဲ.ေျပာရရင္ ေႁမြေျခာက္ကိုက္ သလိုပါပဲဗ်ာ ။ အင္ဂ်င္ရယ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ အကုန္ဂန္.သြားနိုင္ပါတယ္ ။ စနစ္တက်ျပန္ရွင္းျပပါမယ္ ။
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မီးေလာ င္ေ ပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္က ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထဲကို ေလတမ်ိဳးထဲကိုသာ Inlet ကေန သြင္း ၊ အဲ့လိုကိုပဲ အပူခ်ိန္အမ်ား ႀကီးရေအာင္ Piston ဖိအားေတြနဲ. အတင္းဖိသိပ္ ၊ ေတာ္႐ုံမီးမေလာင္နိုင္တဲ့ ဒီဇယ္ဆီေတြ မီးေလာင္ေလာက္တဲ့ အပူခ်ိန္ေ ရာက္ၿပီဆိုမွ ဒီဇ ယ္ဆီေတြကို ေနာ္ဇယ္ကေန သတ္မွတ္အတိုင္းအတာအျဖစ္ အမႈန္အမႊားေ လးေတြျဖန္းေ ပးျခင္းျဖင့္ မီးေလာင္တာပါ ။
အဲ့လိုအင္ဂ်င္ထဲကို မီးေလာင္လြယ္လြန္းတဲ့ ဓာတ္ဆီထည္.ပါၿပီတဲ့ဗ်ာ ။ အပူခ်ိန္ အႏႈတ္ဒီဂရီ မွာေတာင္မီးေ လာင္နိုင္တဲ့ ဓာတ္ဆီဟာ မေလာင္ေလာ င္ေအာင္ အပူခ်ိန္နဲ.ဖိ အားေတြေပးထာတဲ့ အင္ဂ်င္ထဲမွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အထိန္းအကြပ္မဲ့ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ( Uncontrolled Combustion ) ျဖစ္ပါေတာ့တယ္ ။
အဲ့လိုျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္ဂ်င္သံ မီးေလာင္မႈကို နား မေထာင္တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းနဲ.ဆိုရင္ သတိမမူမိဘဲ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာေမာင္းလိုက္မယ္ ဆိုရင္ပဲ အင္ဂ်င္အတြ င္းက မီးေလာင္ခန္းသုံး ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ Piston , Valve , Cylinder Head , Cam Shaft အစရွိတဲ့ ဆက္စပ္ပစၥ ည္းေတြအကု န္ပ်က္စီးပါမယ္ ၊ ဝပ္ေရွာ့ပို.ၿပီး အင္ဂ်င္ခ်ရမယ္ ။
အတြင္းပစၥည္းေ တြအကုန္ျပဳၿပ င္လဲလည္ ရနိုင္ပါတယ္ ။ ဒါတြင္ ပဲလားဆို မဟုတ္ေသးပါဘူး ။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွာ သုံးေနတဲ့ ေနာ္ဇယ္ေတြ အင္ဂ်က္ ရွင္းပန္.ေတြဟာ ဒီဇယ္ရဲ. ေစးပ်စ္မႈ ေခ်ာဆီသေဘာကို မွီခိုၿပီးရပ္တည္ေနပါတယ္ ။
အဲ့လိုပစၥည္းေ တြထဲကို ေစးပ်စ္မႈမရွိတဲ့ ဓာတ္ဆီထည္.လည္ပတ္လိုက္ တဲ့အတြက္ ေခ်ာဆီစနစ္ပ်က္စီးၿပီး ေနာ္ဇယ္ေတြ အင္ဂ်က္ရွ င္းေတြပါ အပိုလိုက္ဂန္.ပါမယ္ ၊ တျခား ရာဘာစီးေတြမွာလည္း ဓာတ္ဆီဟာေပ်ာ္ဝင္ကုန္တာမို. အင္ဂ်င္တခု လုံးပ်က္စီးမႈမ်ိဳးစုံျ ကုံေတြ. ရပါမယ္ ။
ဒီဇယ္အင္ဂ် င္ယာဥ္ေ မာင္းဆရာေတြ သတိျပဳျ ကေစလိုပါတယ္ ။ ဓာတ္ဆီ မွားမထည္.မိဖို.ရယ္ မွားထည္.မိရင္ေတာင္ စက္ႏွိုးၿပီးၿပီး ခ်င္သိၿပီး အခ်ိန္မွီ အေျခအေနမ ဆိုးခင္ရပ္တန္.ဖို.ရယ္ပါ ။
ဒီေလာက္ဆို ဆီမွားထည္.တဲ့ ျပသနာကေန အင္ဂ်င္ေတြဘာျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပားသိေလာက္ပါၿပီ ။ ေနာက္ဆုံး သတိေပးခ် င္တာက ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထဲ ဓာတ္ဆီ လုံးဝ (လုံးဝ)ထည္.ေမာင္းလို.မရပါခမ်ာ ။
စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး နည္းပညာဗဟုသုတ ဖြံ.ၿဖိဳးတိုးတက္ၾကပါေစ ။ Credit L.Zarni (P.T.U)
Previous post အိမ်တိုင်းမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ အိမ်မြှောင်တွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာ ဗဟုသုတများ
Next post ဖထန်တလန်မြို့ (သို့ ) မြန်မာ့သမိုင်း ထဲက ထန်တလန်မြို့လေး